अर्थतन्त्रमा कोरोना असर: जिडिपीको २... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
अर्थतन्त्रमा कोरोना असर: जिडिपीको २ प्रतिशतसम्म क्षति बृद्धिदर ४.३ प्रतिशतमा सिमित हुने एडिबीको प्रक्षेपन
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं,चैत २१
कोरोना भाइरस(कोभिड १९)ले महामारीको रुप लिएपछि नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको छ। देशभर खुला गतिविधि ठप्प भएका छन्।
महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि यसको समाजिक तथा स्वास्थ्यका साथै आर्थिक प्रभाव पनि पर्ने देखिएको छ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा यो महामारीले कति असर गर्ला? कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला? यसबारेमा नेपाल सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताएको छ। सरकारी संस्थाहरुले यसको कुनै पूर्वानुमान सार्वजनिक गरेका छैनन्।
लकडाउनको पछिको व्यवस्थापनमै सरकारी संरचना व्यस्त भएकाले यसको प्रभाव तथा न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने पहलकाक बारेमा अहिले नै कुनै आधिकारीक धारणा आइसकेको छैन।
आजमात्र अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा विज्ञहरुलाई सिंहदरबारमा बोलाएर छलफल गरेका छन्। उनले कोरोनाले समग्र देशको अर्थतन्त्र,जनजिवनमा पार्नसक्ने प्रभाव र त्यसका लागि गर्नुपर्ने कामका बारेमा सुझाव लिएका हुन्। बजेट निर्माणको पुर्वसन्धयामा खतिवडाले आज गरेको छलफल आगामी बजेट निर्माण लक्षित पनि रहेको छ।
यसैबीच एसियाली विकास बैंकले कोरोना महामारीले नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने प्रभावका बारेमा पूर्वानुमान गरेको छ। बैंकले आज प्रकाशित गरेको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक रिपोर्टमा नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावका बारेमा प्रक्षेपन गरेको हो।
एडिबीले यसको सबैभन्दा धेरै मारमा नेपालको पर्यटन क्षेत्र पर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै रेमिट्यान्स, आन्तरिक तथा विदेशी लगानी खुम्चिने,वैदेशिक व्यापार घट्ने छ।
बैदेशिक मुद्रा आर्जनका मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स र पर्यटनमै प्रहार गरेपछि यसको स्वभाविक मार आम्दानीमा पर्ने र त्यसपछि आन्तरिक माग खुम्चिने बैंकको प्रक्षेपन छ।
बैंकले कोरोनाको नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने असरलाई तीन चरणमा प्रक्षेपन गरेको छ। लकडाउनको अवधि,विश्वव्यापी महामारीको नियन्त्रणका आधारमा उसले चरणबद्ध अनुमान गरेको हो।
अहिले तोकिएको आन्तरिक लकडाउन सिमित भएमा यसको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको १ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब रुपैयाँ क्षति हुने बैंकले अनुमान गरेको छ।
अहिले तोकिएको भन्दा हप्ता दशदिन लकडाउन लम्बिएमा अर्थतन्त्रमा १३ अर्ब बढीको क्षति हुने प्रक्षेपन गरेको बैंकले लकडाउन महिना दिन नाघेमा १७ अर्ब अर्थात् कूल ग्राहस्थ उत्पादनको २ प्रतिशतसम्म क्षति हुने प्रक्षेपन गरेको छ।
बैंकले चालु वर्षको आर्थिक बृद्धिदरलाई पनि चरणबद्ध प्रक्षेपन गरेको छ। अहिलेकै अवस्थामा लकडाउन समाप्त भएमा ५.३, लकडाउन हप्तादिन लम्बिएमा ४.८ र महिनादिन नाघेमा ४.३ प्रतिशतको बृद्धिदर सिमित हुने बैंकले प्रक्षेपन गरेको छ। यसअघि बैंकले यो वर्ष ६.३ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हुने प्रक्षेपन गरेको थियो।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २१, २०७६, १७:०२:००